Izindaba - Ikilasi Lehman: Kusetshenziswa Amakhono Wabaqaphi Ekusebenzeni Okuyisithupha
I-Loader uhlobo lomhlaba ozilayishayo kanye nokulayisha ngamatshe nokulayisha imishini esetshenziswa kakhulu emisebenzini yokwakha efana nemigwaqo emikhulu, ojantshi, ukwakhiwa, ugesi wamandla, amachweba, izimayini, njll. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukufaka izinto zokwakha ngobuningi ezifana nenhlabathi, isihlabathi, umcako, namalahle. Gumba kancane insimbi nomhlabathi oqinile.
Okulandelayo ukusetshenziswa kwesilayishi ezindaweni eziyisithupha ezisebenzayo. Inqobo nje uma unekhono kuwo, ungaqinisekisa ukuqedelwa kahle komsebenzi.
Indawo yokusebenza 1: Ifosholo nokumba
Lapho ulayisha inhlabathi noma i-gravel, ukuvikela isondo ekusikeni ngenxa yokushelela kwesondo, amaphuzu alandelayo kufanele aqashelwe:
1) Gcina indawo okusebenzela kuyona iphansi futhi ususe amadwala awayo.
2) Lapho ulayisha izinto ezikhululekile, sebenzisa ngegiya 1 noma 2; lapho ulayisha izinto ezinamandla amakhulu amakhulu, sebenzisa ngegiya 1.
3) Shayela wehlise ibhakede, umise ibhakede elingu-30cm ngaphezu komhlaba, bese ulilahla kancane; uma ibhakede lishaya phansi, amasondo angaphambili azosuka phansi, okwenza amathayi ashelele, okuholele ekunciphiseni kwempilo yenkonzo yamathayi.
4) Shift amagiya ngaphambi kokuya kulokho okubhaliwe, nyathela isinyathelo esisheshayo ngemuva kokunyakaza, bese ufaka ibhakede kulokho okusetshenzisiwe.
5) Uma ifosholo liyinto evulekile, linganisa ifosholo; uma ifosholo lingumatshe, vula ibhakede kancane; ungabi nawo amatshe ngaphansi kwebhakede ukugwema ukudala amasondo angaphambili ashiye phansi futhi ashelele; zama ukugcina umthwalo enkabeni yebhakede, uma umthwalo ungakolunye uhlangothi lwebhakede, uzolahlekelwa ukulinganisela kwawo.
I-6) Ngenkathi ufaka ibhakede entweni, phakamisa i-boom ukuvimbela ukuthi ibhakede lingafakwa lijule kakhulu; lapho uphakamisa ukuqhuma, amasondo angaphambili azokhiqiza ukudonsa okwanele.
I-7) Bheka ukuthi ngabe izinto zokwakha ezanele zenziwe ngamafosholo yini, sebenzisa i-lever yokulawula bese uhoxisa ibhakede ukugcwalisa ibhakede.
I-8) Uma impahla eningi kakhulu ilayishiwe, vala ngokushesha bese upha ibhakede ithiphu ukuxukuza umthwalo oweqile, ukuze ugweme ukuchitheka lapho okokuthutha kuthuthwa.
9) Lapho ufosholoza futhi ulayisha emhlabathini oyisicaba, yenza i-blade iye phansi kancane bese ushayela umlayishi; naka ukugwema umthwalo ogobele eceleni kwebhakede, okudala ukungalingani. Lo msebenzi kufanele wenziwe ngegiya lokuqala.
Lapho usebenza endaweni eyisicaba, umlayishi usebenza ngamagiya ahlehla. Uma kufanele usebenze endaweni egudle igiya elingaphambili, i-engeli yokuhlehlisa ibhakede kufanele ibe ngaphezu kuka-20 °.
1) Foshela inhlabathi ebhakedeni, bese ushayela umlayishi ngamagiya abuyela emuva ukwenza inhlabathi isakaze ngokulinganayo ebhakedeni.
2) Amazinyo ebhakede anamathela emhlabathini bese esebenzisa okudonsa kwangemuva ukusabalalisa inhlabathi ngokulinganayo.
I-3) Ibhakede liphinda lifakwe ifosholo futhi, i-boom iyantanta, ibhakede libekwe phansi, futhi umlayishi ubuyiselwa emuva ukuhlehlisa umhlabathi.
Indawo yokusebenza 3: Ukulayisha nokwenza imisebenzi
1) Lapho uthwele, yehlisa ibhakede ukwehlisa isikhungo sokuthutha samandla adonsela phansi.
2) Indlela yokulayisha nokuthwala ilayisha amasondo ifaka inqubo elandelayo yokujikeleza: ifosholo ukulayishwa-ukuthuthwa-kokulayisha (uthele elolini lokulahla, umlomo wesithando somlilo, njll.).
4) Ukugcinwa kahle kwemizila yokuhamba.
5) Kusebenza kahle ukudlulisa izinto ngaphakathi kwebanga elingu-100m, futhi ijubane lemoto kufanele linqunywe ngokuya ngomgwaqo; ngesikhathi sokuhamba, akuvunyelwe ukuphakamisa i-boom ngomthwalo, ikakhulukazi lapho isiza singalingani.
Indawo yokusebenza 4-5: ukulayisha ukusebenza
Gcina indawo yokusebenza iyisicaba ngesikhathi sokulayisha izinto, gwema ukujika okucijile noma amabhuleki ngesikhathi sokuhamba okunzima, futhi lapho ukushayela ngesivinini esikhulu kungavunyelwe, faka ibhakede enqwabeni ethambekele noma kunqwaba yamatshe. Ukukhetha indlela efanele yokusebenza kunganciphisa inani lokujika nemivimbo, futhi kuthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
1) Ngakwesokudla engeli ukulayisha
O Ingaphambili lomlayishi lihambisana nenqwaba yempahla, okokusebenza kufakwa ngamafosholo, futhi imoto iqhutshwa iqonde ngamagiya abuyela emuva, bese kuthi iloli lokulahla imoto liqhutshwe phakathi komlayishi kanye nenqwaba yempahla.
O Le ndlela idinga isikhathi esifushane sokulayisha futhi inciphisa ngempumelelo isikhathi somjikelezo osebenzayo.
2) Ukulayisha okwenziwe nge-V
o Paka iloli yokulahla endaweni ukuze i-engeli phakathi kwesilayishi neloli yokulahla ibe ku-60 ° angle. Ngemuva kokugcwaliswa kwebhakede, umlayishi uhamba ngamagiya ahlehlayo bese eqondisa ukuze ngaphambili kwakhe kubhekane neloli yokulahla nokulayisha Umshini uya phambili ulayishe izinto elolini lokulahla.
O Le ndlela yokulayisha inekona elincane lokujika nokusebenza kahle komsebenzi.
O Lapho ibhakede ligcwele noma liphakanyiselwe ebangeni eliphakeme, okokuqala dlidliza ibhakede ukuze uzinze umthwalo.
Qaphela: Lapho ukuqhutshwa kwemisebenzi, qikelela ukuthi uvikela isisindo sangemuva ekuxhumaneni nomhlabathi.
Indawo yokusebenza 6: Ukulayishwa kokusebenza
Ngemuva kokuthi umlayishi esondela endaweni elayishayo, phakamisa ifosholo endaweni ephakeme edingekayo, phokophela phambili isigwedlo sokulawula ibhakede ukuze wenze ihalavu liqhubekele phambili futhi lehlise; ukwenza imisebenzi yokulayisha, phakamisa ifosholo ebangeni elithile ukusuka ebhokisini lamaloli Ibhakede ukuze ukhiphe ukuphakama, usondele kancane ebhokisini leloli ukukhipha.
Amasondo Loader For Rent, Isixhumi Sokukhonkolo Esizimele, I-Compact Wheel Loader, Ama-Wheel Loader, Ama-Bell Wheel Loader, Izimayini Zesivinini Samasondo,